Fanombanana ny isan'ny marary :: Nanitsy ny fanasoketana azy ny OMS eto Madagasikara • AoRaha
Fanombanana ny isan’ny marary Nanitsy ny fanasoketana azy ny OMS eto Madagasikara
Nanitsy ny vaovao niely tamin’ny tranonkalan-gazety iray sady novoizin’ny tambajotran-tserasera “Facebook” ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS) eto Madagasikara. Nodisoiny ny fandraisana an’ilay tarehimarika maminavina ny isan’ny Malagasy roa tapitrisa ho voan’ny aretina coronavirus.
Tombatombana tokoa iny tarehimarika iny, raha ny fanazavan’ny OMS, saingy amin’ny tranga tsy fisian’ny fandraisana andraikitra amin’ny ady atao amin’ny fihanaky ny tsimok’aretina Covid-19 eto amintsika.
“ Malagasy roa tapitrisa no mety hizaka ny fiantraikan’ny aretina coronavirus eo amin’ny lafiny fahasalamana sy toekarena raha tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana. Izay no voalaza fa tsy araka ny nivoaka tamin’io gazety io hoe Malagasy roa tapitrisa no ho voan’ny coronavirus”, hoy ny fampitam-baovao nalefan’izy ireo, omaly.
Voatsipika mazava ao anatin’ity fanazavana ity fa midera ny fanjakana malagasy amin’ny ezaka ataony ho fisorohana ny fihanaky ny tsimok’aretina “ Covid19” hatrany ny OMS. Manainga ny Malagasy hanaraka an’ireo toromarika rehetra napetraky ny governemanta koa io vondrona io.
Tetibolam-panjakana 2020 Miditra lalina koa ny Firenena Mikambana
Hafatra ara-pahasalamana :: Entanina hanatona mpitsabo haingana ireo mahatsapa soritr’aretina
Fahavitan’ny fitokana-monina :: Efa nody any an-tranony i Marion